အိုးဝေ: RUSSIAN PROVERBS
စကားပုံဆိုတာဘာပါလဲ။ ကျနော် ၀ီကီမှာရှာဖတ်တော့ စကားပုံဆိုတာ ရိုးရှင်းတိကျပြီး လူသိများ၊ အသုံးများတဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေပါပဲ။ သူတို့တွေက တကယ့်လူမှုနေ့စဉ်ဘ၀ကို အခြေခံပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမှန်တရားတွေပေါ့။ ဥပစာတွေနဲ့ တင်စားသုံးနှုန်းကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေပြောပြတဲ့ စကားပုံတွေကြတော့ နီတိတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုကျနော် အင်တာနက်မှာ လျှောက်ရှာဖတ်တော့ ရုရှားစကားပုံတွေတွေ့ပါတယ်။ ကျတော်တို့ ဘာသာစကားသင်စဉ်တုန်းကလည်း ဆရာမတွေက ရုရှားစကားပုံတွေကို အဆင်သင့်သလို ပြောပြပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုးတွေနဲ့ပဲဖြစ်စေ သူတို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အလျင်းသင့်သလို သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ သင့်တော်တဲ့ စကားပုံတွေထည့်ပြောတတ်ရင် ကိုယ်က သူတို့ဘာသာစကားကို အတော်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြရာရောက်ပါတယ်။
အခုကျနော် ရုရှားစကားပုံတချို့ကို ဘာသာပြန်ပြပါဦးမယ်။ အဓိပ္ပါယ်တွေ လွဲချော်စွာ ထွက်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော့်ဘာသာပြန်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
o Аппети́т прихо́дит во вре́мя еды́.
o Transliteration: Appetit prikhodit vo vremya yedy
o Translation: The appetite comes when eating
o English version: The appetite comes when eating
o ခံတွင်းတွေ့တယ်ဆိုတာ စားသောက်နေတုန်းဖြစ်တာပါ။
o Без кота́ мыша́м раздо́лье.
o Transliteration: Bez kota mysham razdol'ye.
o Translation: Withoutacat mice have no restrictions.
o English version: When the cat is away, the mice will play.
o ကြောင်မရှိ ကြွက်ထ။
o Береги́ пла́тье сно́ву, а честь смо́лоду.
o Transliteration: Beregi plat'ye snovu,achest' smolodu.
o Translation: Take care of clothes since [when they are] new, take care of [your] honor
since [you are] young.
o အင်္ကျီကို အသစ်ကတည်းက ဂရုစိုက်သလို ရိုးသားမှုကိုလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ထိန်းသိမ်းပါ။
o Вре́мя — лу́чший до́ктор
o Transliteration: Vremya — luchshiy doktor.
o Translation: Time [makes the] best healer.
o English version: Time heals all wounds.
o Modern mockery: Время — лучший доктор, но ужасный косметолог. (Time is the best
healer, butaterrible cosmetologist.)
o အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံ သမားတော်။
o Лу́чше по́здно, чем никогда́.
o Transliteration: Luchshe pozdno, chem nikogda.
o Translation: Better late than never.
o English version: Better late than never.
o နောက်ကျတယ်ဆိုတာ ဘယ်သောအခါမှထက်သာတယ်။
o Москва́ не сра́зу стро́илась.
o Transliteration: Moskva ne srazu stroilas'.
o Translation: Moscow wasn't biult at once.
o English version: Rome wasn't built inaday.
o မော်စကိုမြို့တော်ကို တရက်တည်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်။
o На Бо́га наде́йся, а сам не плоша́й.
o Transliteration: Na boga nadeysya,asam ne ploshay
o Translation: Hope for God, but do not be reliant.
o English version: Trust in God, but lock your car.
o ဘုရားသခင်ကိုဆုမတောင်းနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုကို အမှားမလုပ်မိစေနဲ့။ (မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သူသာ၊ ဘုရားသခင်က စောင့်ရှောက်တယ်။)
o Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.
o Transliteration: Ne znaya brodu, ne suysya v vodu.
o Translation: Don't wade intoariver without knowingaford.
o Moral: Don't rush into something without throughly studying the matter first.
o English version: Wait for the cat to jump.
o ရေတိမ်မသိရာ မြစ်ထဲမဆင်းရ။
o Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.
o Transliteration: Ne imey sto rubley,aimey sto druzey.
o Translation: Don't haveahundred rubles, but haveahundred friends.
o ပိုက်ဆံတစ်ရာမရှိရင်နေပစေ၊ အပေါင်းအသင်းတစ်ရာ ရှိပါစေ။
o От ма́ленькой и́скры большо́й пожа́р быва́ет.
o Transliteration: Ot malen'koy iskry bol'shoy pozhar byvayet.
o Translation: A little spark may causeabig fire.
o အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်။
o Повторе́нье - мать уче́нья.
o Transliteration: Povtoren'ye — mat' uchen'ya.
o Translation: Repetition isamother of learning.
o Moral: The more often you repeat your lesson, the more likely you are to memorize it.
o Mockery: Повторе́нье - мать пита́нья (Repetition isamother of feeding).
o အခါခါလေ့ကျင့်ခြင်းဟာ သင်ယူခြင်းမှာ အခရာ။
o Пого́нишься за двумя́ за́йцами, ни одного́ не пойма́ешь.
o Transliteration: Pogonishsya za dvumya zaytsami, ni odnogo ne poymayesh.
o Translation: If you start chasing two hares, you [will] catch none.
o English version: If you run after two hares, you will catch neither., Grasp all, lose all.
o ယုန်နှစ်ကောင်နောက်လိုက်ရင် တစ်ကောင်တောင်မိမှာမဟုတ်။
o Пуста́я бо́чка гро́мче гремит.
o Transliteration: Pustaya bochka gromche gremit.
o Translation: An empty barrel rattles louder.
o Moral: Who does the least, brags the most.
o ဘာမှမရှိတဲ့စည်က အသံပိုထွက်တယ်။
o Пья́ный проспи́тся, дура́к — никогда́.
o Transliteration: P'yanyy prospitsya, durak — nikogda.
o Translation: The drunken will sleep it over, the fool - never.
o အမူးသမားက အိပ်လိမ့်မယ်၊ အရူးက ဘယ်တော့မှ မအိပ်။
o Рыба́к рыбака́ ви́дит издалека́.
o Transliteration: Rybak rybaka vidit izdaleka.
o Translation: A fisherman can tell another fisherman from afar.
o English version: Birds ofafeather flock together.
o Mockery: Дурак дурака видит издалека. (A fool can tell another fool from afar.)
o တံငါးသမားက တံငါးသမားကိုအဝေးကမြင်တယ်။ (မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်တယ်။)
o Семь раз отме́рь, оди́н отре́жь.
o Transliteration: Sem' raz otmer', odin otrezh.
o Translation: Measure seven times, cut once.
o English version: Measure twice, cut once.
o ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်းပါ၊ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ဖြတ်ပါ။
o Умный лю́бит учи́ться, а дура́к учи́ть.
o Transliteration: Umnyy lyubit uchit'sya,adurak uchit.
o Translation: Clever person likes to learn, and the fool - to teach.
o လူတော်တွေက သင်ယူချင်တယ်၊ လူမိုက်တွေက သင်ပေးချင်တယ်။
အခုကျနော်ဘာသာပြန်ထားသလိုပဲ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူဘော်ဘော်တွေလည်း ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံ၊ဒေသရဲ့စကားပုံတွေရှိရင်လည်း ဝေမျှစေချင်ပါတယ်။ အခု က ကျနော် ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောကျတာတွေကို ထုတ်နုတ်ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ကျနော်တွေ့တဲ့ စာအုပ်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဇနိ at 5:24 PM
Labels: တိုလီမိုလီဟိုဟိုဒီဒီများ, ဝေမျှထားသောစာများ
မောင်ဖြူ July 7, 2008 at 5:42 PM
ကိုဇနိရေ စိတ်ဝင်စားစရာ စကားပုံလေးတွေပါ။ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူး။ နောက်ထပ်စကားပုံကောင်းကောင်းလေးတွေလဲတင်ပါဦး။
မေအောင် July 7, 2008 at 8:47 PM
“ ကြောင်မရှိ ကြွက်ထ။”
“ Без кота́ мыша́м раздо́лье.”
Republic July 7, 2008 at 9:56 PM
"စ"လုံး စကားပုံတွေတော့ရှိဝူးထင်တယ် ...
မသိတာ..မသိတာ ..အဲဂလို တော်တာဂျ
မြရွက်ဝေ July 8, 2008 at 6:48 AM
အခု မူလတန်း စကားပုံစာအုပ် သင်နေတာ။ တင်စားပြောဆိုတဲ့ "ကန်ရောကု"(慣用句) [ 油を売る- လပ်ယားလပ်ယားလုပ်နေတယ်- ဆိုတာမျိုး]နဲ့ စကားပုံ "ခိုတိုဝဇ"(ことわざ) [一石二鳥- တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတာမျိုး] ဆိုပြီး ၂ပိုင်းခွဲထားတယ်။ တခါတလေတော့လည်း "ကန်ရောကု"နဲ့ "ခိုတိုဝဇ"က ရောနေပြန်တယ်။ မူလတန်းစာအုပ်တောင် အတော်ဖတ်ယူနေရတာ။ :D စကားပုံတစ်ခုအကြောင်းတော့ http://myaywetwai.blogspot.com/2007/11/blog-post_25.htmlမှာ တစ်ခါရေးဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ "ခိုတိုဝဇ"linkကို ပေးထားပါတယ်။ :)
wynn.sun July 8, 2008 at 1:47 PM
ကျေးဇူးပါဗျာ.. ကျွန်တော်မကြားဘူးသေးတဲ့ ရုရှားစကားပုံတွေ အများကြီးရှိသေးပါလား.. :)
တားမြစ် ထားသော... July 10, 2008 at 4:03 PM
ဘာသာစကားကို တကယ်လေ့လာနိုင်ပါပေ့။ ကောင်း၏။ မြန်မာစကားပုံကို ဒီကကောင်က နည်းနည်းသိတာ။ သူတို့ဆီမှာလည်း ဒါမျိုးတွေရှိသကိုး....
အညာသား July 10, 2008 at 11:23 PM
လေးစားမိပါရဲ့ ။ ။